ကားပြတင်းမှန်ကို ဘယ်လိုသန့်ရှင်းသင့်သလဲ - Optima Werkz Yangon
သင့်ကားရဲ့ ပြတင်းမှန်တွေကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရတာဟာ ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့ အရာတစ်ခုလို့ ထင်ချင်စရာပါ။ ဒါပေမယ့် အစက်အပျောက်တွေ၊ အခိုးအငွေ့တွေ ကင်းစင်ပြီး သေသေချာချာ သန့်စင်နေဖို့ ဆိုတာတော့ တစ်ခါတစ်ရံ အခက်ကြုံရနိုင်ပါတယ်။
ကားအတွင်းမှာ ဆေးလိပ်မသောက်တဲ့သူရဲ့ ကားပြတင်းတွေတောင် အတွင်းမှန်မှာ ချွတ်ရခက်တဲ့ အခိုးအငွေ့ရာ ထင်ကျန်တတ်ပါတယ်။ အဆိုပါ အငွေ့ရိုက်တဲ့ အရာဟာ ပလတ်စတစ်တံခါးဘောင်၊ ဒက်ရ်ှဘုတ်၊ ထိုင်ခုံနဲ့ ခြေနင်းတို့ကနေ လပေါင်းများစွာ ထွက်ထားတဲ့ ဓါတုအခိုးအငွေ့တွေလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒီ အခိုးအငွေ့ တွေက ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်နိုင်လောက်အောင်တော့ မဟုတ်ပေမယ့် နေပြင်းပြင်းထိုးတဲ့အခါ မလွဲမရှောင်သာ ဖြစ်တတ်တဲ့အတွက် ဒါတွေကို ရှင်းဖို့ဟာ ကားပြတင်းကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အတွက် ခက်ခဲတဲ့ အပိုင်း ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ကားပြတင်းရဲ့ အပြင်ဘက်မှာလည်း အလားတူဖြစ်နိုင်တာပါပဲ။ သင့်ကားကိုမောင်းနှင်တဲ့အခါ လမ်းတွေ၊ သစ်ပင်တွေ၊ ပန်းဝတ်ဆံတွေနဲ့ ဖြတ်သန်းလာမိတဲ့ အမှိုက်သရိုက်တွေက ကပ်ခါစမှာ မသိသာပေမယ့် ပြတင်းမှန် တစ်ခုလုံး အစက်အပျောက်တွေ ဖြစ်လာပြီး သန့်ရှင်းဖို့ ခက်တာမျိုး ကြုံရနိုင်ပါတယ်။ မဖယ်ရှားမိရင်တော့ မြင်နေရရင် စိတ်အနှောင့်အယှက် ကြုံနေရမှာပါပဲ။
၁. ကားကိုရေဆေးပါ၊ ပြတင်းတွေကို နောက်ဆုံးမှ ဆေးပါ။
၂. အပြင်ဘက်မှန်ကို မှန်သန့်စင်ရည် အသုံးပြုပြီး ဆေးကြောပါ။ ပြတင်းမှန်တွေကို ဒေါင်လိုက်သုတ်ပြီးမှ မိုက်ခရို ဖိုင်ဘာတာဝါနဲ့ ကန့်လန့်ဖြတ် ပြန်သုတ်သင်ပါ။ ထို့နောက် အညစ်အကြေးတွေ အစွန်းအထင်းတွေ ပြောင်စင်သွားတဲ့ထိ ဒေါင်လိုက်၊ ကန့်လန့်ဖြတ် သုတ်တာကို တလှည့်စီလုပ်ပါ။
၃. အပေါ်ဘက်ဘောင်နဲ့ ထိတွေ့တဲ့ ပြတင်းမှန်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို သေချာ သန့်ရှင်းပါ။ မိုက်ခရိုဖိုင်ဘာ အဝတ်စ တစ်ခုကို အသုံးပြုပြီး မှန်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းတလျောက်ကို သုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကပ်ညိနေတဲ့ အရာတွေကို သန့်ရှင်းစေချင်ရင်တော့ အားနည်းနည်းသုံးပြီး ဖိပွတ်တိုက်လို့ ရပါတယ်။
၄. ပြတင်းရဲ့ အတွင်းဘက်ကို သန့်ရှင်းပြီးရင် အပြင်ဘက်ကို တစ်ခါပြန် သန့်စင်ပါ။
၅. ပြတင်းအပြင်ဘက်ကို မိုးနဲ့ ရေစက်စင်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးတဲ့ Repellent တစ်ခုခု အသုံးပြုပါ။
အချိန်အနည်းငယ်ကြာမြင့်နိုင်ပြီး ထပ်ခါတလဲလဲ ပြုလုပ်ရတဲ့ အပိုင်းတွေ ရှိပေမယ့် ပြတင်းမှန်သန့်ရှင်းမှုဟာ မောင်းနှင်သူရဲ့ အမြင်ကိုရော၊ စိတ်ကိုပါ ကြည်လင်စေမှာပါ။
ကိုယ့်ရဲ့ကားမှန်ပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အဆင့်မြှင့်တင်ချင်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကားကျန်းမာရေးအတွက် စစ်ဆေးချင်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျွမ်းကျင်သူတွေ ရှိတဲ့ Optima Werkz Yangon ဆီကို လာခဲ့ဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ ကားအမျိုးအစား မျိုးစုံကို ကျွမ်းကျင်စွာ ပြုပြင်မွမ်းမံပေးနိုင်တဲ့ Optima Werkz Yangon ကိုဆက်သွယ်လိုရင်တော့ ဖုန်းနံပါတ် +95 9782626 888, +95 9782626 999 ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
Ref – https://shop.advanceautoparts.com/r/car-projects/how-to-clean-car-windows
သငျ့ကားရဲ့ ပွတငျးမှနျတှကေို သနျ့ရှငျးရေးလုပျရတာဟာ ရိုးရှငျးလှယျကူတဲ့ အရာတဈခုလို့ ထငျခငျြစရာပါ။ ဒါပမေယျ့ အစကျအပြောကျတှေ၊ အခိုးအငှတှေ့ေ ကငျးစငျပွီး သသေခြောခြာ သနျ့စငျနဖေို့ ဆိုတာတော့ တဈခါတဈရံ အခကျကွုံရနိုငျပါတယျ။
ကားအတှငျးမှာ ဆေးလိပျမသောကျတဲ့သူရဲ့ ကားပွတငျးတှတေောငျ အတှငျးမှနျမှာ ခြှတျရခကျတဲ့ အခိုးအငှရေ့ာ ထငျကနျြတတျပါတယျ။ အဆိုပါ အငှရေို့ကျတဲ့ အရာဟာ ပလတျစတဈတံခါးဘောငျ၊ ဒကျရျှဘုတျ၊ ထိုငျခုံနဲ့ ခွနေငျးတို့ကနေ လပေါငျးမြားစှာ ထှကျထားတဲ့ ဓါတုအခိုးအငှတှေ့လေညျး ဖွဈနိုငျတယျ။ ဒီ အခိုးအငှေ့ တှကေ ကနျြးမာရေးကို ထိခိုကျနိုငျလောကျအောငျတော့ မဟုတျပမေယျ့ နပွေငျးပွငျးထိုးတဲ့အခါ မလှဲမရှောငျသာ ဖွဈတတျတဲ့အတှကျ ဒါတှကေို ရှငျးဖို့ဟာ ကားပွတငျးကို သနျ့ရှငျးရေးလုပျဖို့အတှကျ ခကျခဲတဲ့ အပိုငျး ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။
ကားပွတငျးရဲ့ အပွငျဘကျမှာလညျး အလားတူဖွဈနိုငျတာပါပဲ။ သငျ့ကားကိုမောငျးနှငျတဲ့အခါ လမျးတှေ၊ သဈပငျတှေ၊ ပနျးဝတျဆံတှနေဲ့ ဖွတျသနျးလာမိတဲ့ အမှိုကျသရိုကျတှကေ ကပျခါစမှာ မသိသာပမေယျ့ ပွတငျးမှနျ တဈခုလုံး အစကျအပြောကျတှေ ဖွဈလာပွီး သနျ့ရှငျးဖို့ ခကျတာမြိုး ကွုံရနိုငျပါတယျ။ မဖယျရှားမိရငျတော့ မွငျနရေရငျ စိတျအနှောငျ့အယှကျ ကွုံနရေမှာပါပဲ။
၁. ကားကိုရဆေေးပါ၊ ပွတငျးတှကေို နောကျဆုံးမှ ဆေးပါ။
၂. အပွငျဘကျမှနျကို မှနျသနျ့စငျရညျ အသုံးပွုပွီး ဆေးကွောပါ။ ပွတငျးမှနျတှကေို ဒေါငျလိုကျသုတျပွီးမှ မိုကျခရို ဖိုငျဘာတာဝါနဲ့ ကနျ့လနျ့ဖွတျ ပွနျသုတျသငျပါ။ ထို့နောကျ အညဈအကွေးတှေ အစှနျးအထငျးတှေ ပွောငျစငျသှားတဲ့ထိ ဒေါငျလိုကျ၊ ကနျ့လနျ့ဖွတျ သုတျတာကို တလှညျ့စီလုပျပါ။
၃. အပျေါဘကျဘောငျနဲ့ ထိတှတေဲ့ ပွတငျးမှနျရဲ့ အစိတျအပိုငျးတှကေို သခြော သနျ့ရှငျးပါ။ မိုကျခရိုဖိုငျဘာ အဝတျစ တဈခုကို အသုံးပွုပွီး မှနျရဲ့ထိပျပိုငျးတလြောကျကို သုတျပေးနိုငျပါတယျ။ ကပျညိနတေဲ့ အရာတှကေို သနျ့ရှငျးစခေငျြရငျတော့ အားနညျးနညျးသုံးပွီး ဖိပှတျတိုကျလို့ ရပါတယျ။
၄. ပွတငျးရဲ့ အတှငျးဘကျကို သနျ့ရှငျးပွီးရငျ အပွငျဘကျကို တဈခါပွနျ သနျ့စငျပါ။
၅. ပွတငျးအပွငျဘကျကို မိုးနဲ့ ရစေကျစငျခွငျးကို ကာကှယျပေးတဲ့ Repellent တဈခုခု အသုံးပွုပါ။
အခြိနျအနညျးငယျကွာမွငျ့နိုငျပွီး ထပျခါတလဲလဲ ပွုလုပျရတဲ့ အပိုငျးတှေ ရှိပမေယျ့ ပွတငျးမှနျသနျ့ရှငျးမှုဟာ မောငျးနှငျသူရဲ့ အမွငျကိုရော၊ စိတျကိုပါ ကွညျလငျစမှောပါ။
ကိုယျ့ရဲ့ကားမှနျပိုငျးနဲ့ ပတျသကျပွီး အဆငျ့မွှငျ့တငျခငျြတာပဲ ဖွဈဖွဈ၊ ကားကနျြးမာရေးအတှကျ စဈဆေးခငျြတာပဲ ဖွဈဖွဈ ကြှမျးကငျြသူတှေ ရှိတဲ့ Optima Werkz Yangon ဆီကို လာခဲ့ဖို့ ဖိတျချေါလိုကျပါတယျ။ ကားအမြိုးအစား မြိုးစုံကို ကြှမျးကငျြစှာ ပွုပွငျမှမျးမံပေးနိုငျတဲ့ Optima Werkz Yangon ကိုဆကျသှယျလိုရငျတော့ ဖုနျးနံပါတျ +95 9782626 888, +95 9782626 999 ကိုဆကျသှယျနိုငျပါတယျ။